अनौठो प्रतियोगिता : १ वर्षसम्म मोबाइल नचलाए ७१ लाखको पुरस्कार
२०७५ पौष २ सोमबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय मानिसहरुको लागि मोबाइल केही समय बस्नु पनि निकै कठिन भइसकेको छ । केही मानिसहरु भने अत्यधिक मात्रामा नै मोबाइल चलाउने गर्छन् । केहीले मोबाइलको लतबाट पार पाउनका लागि धेरै प्रयास पनि गर्ने गर्छन् तर यो असम्भवप्रायः हुने गरेको छ । यस्तोमा एक अनौठो किसिमको योजना अघि सारिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष २ सोमबार, काठमाडौं । एप्पल तथा गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीहरु आफ्नो एप स्टोरमा जासुसी एपको बेचिरहेका छन् । यो एपको माध्यमबाट आफ्ना बालबालिकाहरुको म्यासेजमा निगरानी राख्न सकिन्छ । त्यसका साथै आफ्ना कर्मचारीहरुलाई ट्र्याक गर्न सकिन्छ । ... बाँकी अंश»
नेपालमा ओपो आर १७ प्रो सार्वजनिक, यस्तो छ बिशेषता
२०७५ पौष २ सोमबार, काठमाडौं । स्मार्टफोन ब्राण्ड ओपोले नेपालमा आर सिरिज अन्तर्गत आर १७ प्रो सार्वजनिक गरेको छ । उपभोक्ताका दैनिकअवश्यकताको पूर्ति गर्ने सोचका साथआर १७ प्रो नयाँआकर्षक ग्राडियण्ट डिजाइन सार्वजनिक गरिएको हो । ... बाँकी अंश»
तीन लाख वेभसाइट बन्द गर्छौँ :मन्त्री बाँस्कोटा
२०७५ पौष १ आइतबार, काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अश्लील एवं यौनसम्बन्धित थप तीन लाख वेभसाइट बन्द गरिने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
फेसबुक किन यति धेरै असुरक्षित ? ६८ लाखको निजी तस्वीर चोरी
२०७५ मङ्सिर २९ शनिबार, काठमाडौं । फेसबुकको ६८ लाख प्रयोगकर्ताहरुको निजी तस्वीर चोरी भएको स्वीकार गर्दै कम्पनीले माफी मागेको छ । ... बाँकी अंश»
‘इडियट’ सर्च गर्दा किन आउँछ ट्रम्पको फोटो ?
२०१८ मा गुगलमा सबैभन्दा बढी खोजिए यी कुरा
२०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार, काठमाडौं । कुनै पनि कुरा थाहा पाउनको लागि हामी अहिलेको समयमा सबै भन्‍दा पहिले गुगलमा खोज्न थाल्छौ । के तपाईलाई थाहा छ सन् २०१८ मा सबैभन्दा ज्यादा कुन शब्द गूगलमा खोजियो ? ... बाँकी अंश»
चन्द्रमाको अध्ययनका लागि चीनको महत्वाकांक्षी योजना
२०७५ मङ्सिर २७ बिहिबार, काठमाडौं । अन्तरिक्षको मामिलामा चीन अमेरिका र रुसभन्दा पछाडि परेको मुलुक हो । यद्यपि पछिल्लो समय मलुकको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको व्यापक सुधारसँगै चीनले पनि आफ्नो ध्यान अन्तरिक्षमा खिचेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, जकार्ता। इन्डोनेसियाको इ–कमर्स साइट टोकोपेडीयाले जापानको सफ्टबैंक र चीनको अलिबाबा समेतका लगानीकर्ताबाट एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर लगानी जुटाएको बुधबार घोषणा गरेको छ। नयाँ लगानी भित्रिएसँगै टोकोपेडीयाले अनलाइन व्यापार र रकमको कारोबारलाई इन्डोनेसियामा अझ विस्तार गर्नेछ। कम्पनीले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरुमा मौलाएको विद्युतीय कारोबारमा आफूलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, न्यूयोर्क। चिनीयाँ प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी टेन्सेन्टद्वारा प्रबद्र्धित टेन्सेन्ट म्यूजिकले संयुक्तराज्य अमेरिकामा १ अर्ब ७ लाख डलरको शेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरेको छ। टेन्सेन्ट म्यूजिक बुधबार न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत पनि हुँदैछ। हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा बुझाइएको कागजातमा टेन्सेन्ट म्यूजिकको प्रति शेयर मूल्य १३ अमेरिकी डलर तोकिएको छ। ... बाँकी अंश»
गुगल प्लसको सेवा अप्रिलमा बन्द हुँदै, ५ करोड प्रयोगकर्ताको डाटा असुरक्षित
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन कम्पनी गुगलको सामाजिक सञ्जाल सेवा आगामी अप्रिलमा बन्द हुने भएको छ । ... बाँकी अंश»
जसको आविष्कारसँग सबै परिचित छन् तर उनलाई चिन्दैनन्
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, काठमाडौं । विश्वका प्रमुख वैज्ञानिकहरु थोमस एडिसन, एलेग्जेन्डर ग्राहम बेल, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइस्टाइनलगायतका वैज्ञानिकहरुको नाम धेरैलाई थाहा हुन्छ । उनीहरुको विषयमा धेरै ठाउमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्तोमा धेरैजसो आविष्कारकहरु पुरुष छन् । ... बाँकी अंश»
तपाईको खल्तीमा छ सुनको खानी
२०७५ मङ्सिर २५ मंगलबार, काठमाडौं । तपाइँको खल्तीमा सुनको खजाना छ भन्दा तपाइँलाई विश्वास लाग्ला ? पक्कै पनि लाग्दैन । यद्यपि यो साँचो कुरा हो । मानिसहरुको मोबाइललगायतका विद्युतीय सामग्रीहरुमा सुन पाइन्छ । यद्यपि उक्त सामग्रीहरुबाट सुन चाँदीजस्ता धातुहरु निकाल्नका लागि ठुलै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल फोन, ट्याबलेट र ल्यापटपजस्ता एक टन विद्युतीय फोहोरबाट करिब ३५० ग्राम सुन निकाल्न सकिन्छ । यस किसिमका सामग्रीहरुबाट निकालिएको सुन सन् २०२० मा हुने ओलम्पिक खेलका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । २०२० को ओलम्पिकमा प्रयोग हुने सबै मेडलहरु अर्बान माइनिङ्गबाट पाइएका धातुहरुबाट तयार गर्ने तयारी गरिएको छ । यो ओलम्पिकमा करिब ५००० मेडलहरु प्रदान गरिनेछ । ... बाँकी अंश»
पृथ्वीबाट उडेको ४१ वर्षपछि सौर्यमण्डलबाट बाहिरियो नासाको विमान
२०७५ मङ्सिर २५ मंगलबार, काठमाडौं । नासाको भोयगर २ प्रोब सौर्य मण्डलभन्दा बाहिर पुगेको छ । सौर्य मण्डलभन्दा बाहिर जाने दोस्रो मानव निर्मित विमान हो । नासाले सन् १९७७ मा पृथ्वीबाट उडेको थियो । ... बाँकी अंश»
४८ मेगापिक्सलको क्यामेरा भएको पहिलो स्मार्टफोन सार्वजनिक
२०७५ मङ्सिर २४ सोमबार, काठमाडौं । हुवावेको सब–ब्राण्ड अनरले सोमबार हङकङको एक कार्यक्रममा नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ४८ मेगापिक्सलको रेयर क्यामेरा भएको अनर भी२० सार्वजनिक गरेको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर २४ सोमबार, बेइजिङ। चीनले भीमकाय दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेकी वित्तीय प्रमुख मेङ वान्झाउमाथि क्यानाडाले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा र आलोचना गरेको छ। अमेरिकी आग्रहमा क्यानाडामा पक्राउ परेकी मेङलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने योजना छ। ... बाँकी अंश»
क्युबामा बल्ल सुरु भयो सबैका लागि इन्टरनेट, श्रमिकको एक महिनाको तलबभन्दा बढी डाटा शुल्क
२०७५ मङ्सिर २३ आइतबार, काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक क्युबामा इन्टरनेट सुरु भएको छ । यो मुलुकमा पहिलोपटक सबै मानिसहरुका लागि थ्रीजी सेवा सुरु गरेको हो । क्युबाको टेलिकम एटेक्साले यो सेवा सुरु गरेको हो । यद्यपि यो मुलुकमा यसअघि पनि इन्टरनेटको सेवा थियो तर यहाँका सबै मानिसहरुले यसको प्रयोग भने गर्न पाउँदैनथे । ... बाँकी अंश»
एकपछि अर्को समस्यामा हुवावे, प्रतिबन्धको तयारीमा जापान
२०७५ मङ्सिर २२ शनिबार, काठमाडौं । हुवावे कम्पनी अहिले चर्चामा छ । क्यानडाका अधिकारीहरूले अमेरिकाको सुरक्षा निकायको आग्रहमा हुवावेकी आर्थिक मामिलासम्बन्धी प्रमुख एवं हुवावेकी उपाध्यक्ष मङ्ग वान्जूलाई गत डिसेम्बर १ मा भ्यानकुभरबाट हिरासतमा लिएका थिए । ... बाँकी अंश»